Nzaghachi nye ngwa enyemaka enyemaka India na ngwa ngwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Nzaghachi nye ngwa enyemaka enyemaka India na ngwa ngwa
Akụkọ mkpakọrịta • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Dr. Subhash Goyal, Onye isi oche nke Njikọ nke Ndị Ọrụ Nleta Njem Nleta nke India, na ngwugwu enyemaka enyemaka ndị njem nlegharị anya nke India.
Enwere mmeghachi omume agwakọtara na azụmaahịa njem ndị njem enyemaka nke ndị njem nlegharị anya na India mara ọkwa nke Minista Ego na-ekwupụta iji weghachi njem. Ọhaneze na-eche na ọ dị obere, na-egbu oge, ọ bụ ezie na ọ na-amata na ụlọ ọrụ ahụ enweghị mgbei.
Mịnịsta na-ahụ maka ego maka ego, Smt Nirmala Sitharaman, kwuputara ngwugwu enyemaka nke ndị njem nleta na India ụnyaahụ, June 28, 2021.
Emere ngwugwu a iji lebara mkpa nke ndị njem na ndị njem metụtara ya n'ihi COVID-19.
Ihe a na-atụ anya ya bụ ịkwalite akụ na ụba na India n'ọgụ a na-alụso imirikiti nsogbu ndị coronavirus kpatara.
Dr. Subhash Goyal, Onye isi oche nke Confederation of Tourism Professionals of India, onye isi STIC Group, kwuru nke a na ọkwa ọkwa nke Minista Ego maka njem nleta.
“Nkwupụta a egbuola oge na obere. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 10 enweghịzi ọrụ, ọtụtụ puku ụlọ ọrụ enwekwala ego.
“Na-enweghị ọkwa maka ụbọchị a ga-ewepụta visa ndị e-njem nleta na ụbọchị a ga-ebido maka njem ụgbọ njem mba ofesi, anyị enweghị ike ịtụte njem, njem visa n'efu agaghị enwe isi. Ọzọkwa, ndị njem nleta niile na-emefu ego ụgbọ ala nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ego visa ahụ n'ụzọ dị mfe. Ihe a ga-abara naanị ndị njem si Myanmar, Bangladesh, na Pakistan uru. Enwere ike iji ego echekwara site na ịnyeghị visa ndị njem n'efu maka inye onyinye nye ndị nduzi njem nleta na ndị ọrụ njem njem.
Inye ndị nduzi na ndị njem nleta obere ego mgbazinye ego enweghịkwa isi, n'ihi na olee otu ha ga esi weghachi ego mbinye ma kwụọ ọmụrụ nwa mgbe enweghị azụmahịa? Ọ bụrụ na gọọmentị chọrọ n'ezie inye aka, mgbe ahụ enwere naanị ihe nduzi 11,000-12,000 a ma ama nke gọọmentị, gọọmentị nwere ike ịnye ha otu onyinye otu oge n'okpuru otu ndokwa dịka ha na-enye ndị ọrụ ugbo na inye ndị na-enweghị osisi ịda ogbenye. . N'otu ndokwa ahụ, enwere ike inye ndị nduzi njem nleta, ndị obere na ndị na-eme njem nlegharị anya, ndị nwe ụgbọ ala / ndị tagzi na ndị ọkwọ ụgbọ ala, wdg. Nke a ga-enyere ha aka ịlanarị ruo oge emepere oke ala anyị, ndị njem nleta amalite ịbịa India.